Barakac baahsan oo saakay ka socda deegaanka Goof-gaduud iyo Al-shabaab oo halkaasi ku wajahan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Barakac baahsan oo saakay ka socda deegaanka Goof-gaduud iyo Al-shabaab oo halkaasi ku wajahan
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay ayaa sheegaya in barakac baahsan uu maanta halkaasi ka socdo, kadib markii ay deegaankaasi gebi-ahaan isaga baxeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dadkaasi ka barakacaya deegaanka Goof-gaduud ayaa ka cabsi qaba inay dhibaatooyin kala kulmaan dagaalyahanadda Al-shabaab oo la sheegayo inay halkaasi maanta kusoo wajahan yihiin.
Deegaanka Goof-gaduud oo qiyaastii 30km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa gacanta ku haayay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo garabsanaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dagaal laba maalmood kahor ka dhacay deegaanka Goof-gaduud ayaa markii hore waxaa la wareegay dagaalyahanada Al-shabaab oo halkaasi weerar seddax geesood ah kusoo qaaday.
Muddo saacado ah kadib ayaa waxaa deegaanka Goof-gaduud weerar rogaal celis kusoo qaaday ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ugu dambeyn la wareegay gacan ku haynta deegaankaas.
Ciidankaasi huwanta ah oo labadii maalmood ugu dambeysay gacanta ku haayay deegaanka Goof-gaduud ayaa haatan ka bixitaankooda halkaas la sheegayaa inay salka ku hayso, kadib markii ay dhawaantaan halkaasi isaga baxeen ciidankii Itoobiya ee AMISOM oo in muddo ah halkaasi gacanta ku haayay.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan ka bixitaanka ciidankooda ee deegaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay.
Dhinaca kale, dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa la sheegayaa inay haatan kusoo wajahan yihiin deegaanka Goof-gaduud, iyagoo qorshohoodu yahay inay markale la wareegaan gacan ku haynta deegaankaasi, iyadoona shacabkii halkaasi ku sugnaa ay maanta ka barakacayaan guryahooda.